Home Wararka Mastercard iyo Visa oo joojnaya adeegyadooda Ruushka
Mastercard iyo Visa oo joojnaya adeegyadooda Ruushka
Shirkadaha kaararka lagula baxo lacagta ee Visa iyo Mastercard ayaa sheegay in ay joojin doonaan howlihii ay ka hayeen Ruushka, iyaga oo ku biiraya liiska sii kordhaya ee shirkadaha caalamiga ah ee diiday in ay ganacsi la sameeyaan Moscow ka dib duullaanka ay ku qaaday Ukraine.
Talaabooyinkan ayaa timid ka dib codsi ka yimid madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy horaantii Sabtidii, waxa ay dhabarjab kale ku tahay waaxda maaliyadda ee Ruushka waxaana lagu wadaa in ay sii go’doomiyaan dhaqaalahooda cunaqabateynta la saaray.
Mastercard ayaa ku dhawaaqday in kaarar ay bixiyaan bangiyada Ruushku aanay dib dambe u taageeri doonin shabakadeeda isla markaana kaar kasta oo dalka dibaddiisa laga bixiyo aanu ka shaqaynayn dukaamada Ruushka ama ATM-yada.
“Uma qaadaneyno go’aankan si fudud,” Mastercard ayaa ku yiri hadal uu soo saaray, isaga oo intaa ku daray in ay dhaqaaqday ka dib wadahadalo lala yeeshay macaamiisha, la-hawlgalayaasha iyo dawladaha.
Visa waxa kale oo ay sheegtay in kaararka laga bixiyo Ruushka aanay ka sii shaqayn doonin meel ka baxsan dalka, isaga oo intaa ku daray in ay la shaqaynayso macaamiisha iyo la-hawlgalayaasha Ruushka si ay u joojiyaan dhammaan wax kala iibsiga fiisaha maalmaha soo socda.
“Waxaan ku qasbanahay inaan tallaabo qaadno ka dib duulaanka aan la aqbali karin ee Ruushka ee Ukraine, iyo dhacdooyinka aan la aqbali karin ee aan goob joog ka nahay,” Guddoomiyaha Visa iyo Madaxa Fulinta Al Kelly ayaa ku yiri hadal uu soo saaray.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, oo wada hadal la yeeshay Zelenskyy, ayaa soo dhaweeyay go’aamada shirkadaha.
“Madaxweyne Biden wuxuu xusay in maamulkiisu uu ku boorinayo ammaanka, bini’aadantinimada, iyo kaalmada dhaqaale ee Ukraine wuxuuna si dhow ula shaqeynayaa Congress-ka si loo helo maaliyad dheeri ah,” Aqalka Cad ayaa ku yiri bayaan uu soo saaray.
Labada shirkadood ee kaararka deynta ayaa horey u shaaciyey inay u hoggaansameen cunaqabateynta Mareykanka iyo kuwa caalamiga ah ee lagu soo rogay Ruushka ka dib duulaankii 24-kii Febraayo.
Bangiyada waaweyn ee Ruushka, oo ay ku jiraan amaahiyaha ugu weyn ee Sberbank iyo Bangiga Dhexe ee Ruushka, ayaa hoos u dhigay saamaynta joojinta kaarku ku yeelanayso macaamiishooda.
“Dhammaan kaararka bangiga Visa iyo Mastercard ee ay bixiyaan bangiyada Ruushka waxay sii wadi doonaan inay si caadi ah uga shaqeeyaan dhulka Ruushka ilaa taariikhda uu dhacayo,” ayuu yiri Bangiga Dhexe ee Ruushka, isaga oo uga digaya Ruushka u safraya dibadda, si kastaba ha ahaatee, waa in ay wataan siyaabo kale oo lacag bixin ah.
Dhaqaaleyahan Maxamed Xaydar ayaa sheegay in go’aanka Visa iyo Mastercard uu yeelan doono “saameyn dhab ah oo aad u xun waxaana laga yaabaa inay curyaamiso ganacsiyo badan”.
“Waxaan ka hadlaynaa wadarta 210 milyan oo kaararka haysta ee Ruushka,” ayuu u sheegay Al Jazeera, isagoo raaciyay in ay jiri doonto boqolaal balaayiin doolar oo biilal ah.
Ogeysiisyada Visa iyo Mastercard’s ayaa yimid saacado kadib markii PayPal ay joojisay adeegyadeeda Ruushka.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Ukraine Mykhailo Fedorov ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray warqad subaxnimadii sabtida ka timid maamulaha PayPal Dan Schulman oo si rasmi ah ugu dhawaaqay: “Xaalada hadda jirta, waxaan joojineynaa adeegyada PayPal ee Ruushka.”
Waxa uu intaa ku daray in PayPal ay sii wadi doonto inay taageerto shaqaalaheeda gobolka oo ay diiradda saari doonto “u suurtagelinta macaamiisheena iyo bulshadayada shaqaalaha caalamiga ah inay taageeraan” dadaallada bani’aadamnimada ee Ukraine.
Previous articleUbax Tahliil oo looga adkaaday kursiga HOP 60
Next articleGuddiga qiimeynta doorashada Garbahaarey oo warbixin u gudbiyey Rooble
(Cadeyn) Dowladda Faderaalka Oo Wasiirrada Ku Caburineysa In Aaney La Hadlin...